Chirongwa che2017 Mandela Washington Fellowship Chinosvika kuMagumo muWashington
Vechidiki vekunyika dzakasiyana-siyana dzemu Africa vanosvika chiuru chimwe chete kusanganisira makumi matanhatu vanobva kuZimbabwe, vaungana muWashington DC neMuvhuro pamusangano wekupedzisa chirongwa chavo cheMandela Washington Fellowship chegore rino.
Musangano weMandela Washington Fellowship Summit uyu wavhurwa zviri maputemo naVaMark Taplin, avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemunyori wedzidzo mubazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, State Department.
VaTaplin vakorokotedza vechidiki ava nekupedza zvidzidzo zvavo mumasvondo matanhatu vari muAmerica vachiti vane chivimbo chekuti vachashandisa ruzivo rwavawana kusimudzira nyika dzavo.
VaTaplin, avo vakambogara munyika dzemuAfrica dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Zimbabwe, vakurudzirawo vechidiki ava kuti vatevere gwara ravaimbove mutungamiri weSouth Africa, VaNelson Mandela, rehutungamiri hwejekerere uye hune hudzamu.
Nyaya Ina Ntungamili Nkomo
Vachitaurawo pamusangano uyu, VaWade Warren, avo vakafanobata chigaro chemukuru-mukuru weU.S. Agency for International Development, vatsinhirawo mashoko aVa Taplin.
“Kana madzokera kunyika dzenyu musanganise zvamadzidza pasi pechirongwa ichi neruzivo rwamagara muinarwo kubatsira veruzhinzi. Izvi zvakakosha zvikuru nekuti Africa iri kuchinja zvikuru,” vadaro VaTaplin.
Vakambova gurukora rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Muzvare Condoleeza Rice, vatumirawo mashoko averengwa pamusangano uyu vachidada nevechidiki ava uye vachivakurudzira kuti vashande nesimba mukusimudzira nyika dzavo.
“Makorokoto kwamuri mese nekupinda muchirongwa ichi. Pakudzkera kwenyu kunyika dzenyu ndinovimba muchashandisa zvamadzidza muchiteera gwara raVaNelson Mandela avo vanova gamba rangu,” vadaro Muzvare Rice.
Murwiri wekodzero dzevanhu, VaDzikamai Bere, vanoti vechidiki vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana pakutsvaga mazano ekubudisa nyika mumadhaka ayiri.
VaBere vanoti zvakawanda zvavakadzidza pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship izvo zvichavabatsira pakuita mabasa avo nemazvo kana vadzokera kuZimbabwe
Musangano uyu uri kuenderera mberi nemusi weChipiri uchizopera nemusi weChitatu uye uchavharwa nevanyarikani vanosanganisira Senator Chris Coons vekuDelaware.